CyberLink PowerDirector 15 (Lite Edition) Pro ( Free License Giveaway) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Editor Giveaway Video Editing CyberLink PowerDirector 15 (Lite Edition) Pro ( Free License Giveaway)
CyberLink PowerDirector 15 (Lite Edition) Pro ( Free License Giveaway)
Maung Pauk at 10:19:00 PM Computer software, Editor, Giveaway, Video Editing,
Full Version Software Free Download and Tech News Update
Video Editing လုပ်တဲ့ Software တွေထဲမှာ CyberLink PowerDirector ကို လူသုံးများပါတယ်.. သာမန် အပျော်တန်း Home Video သာမက ပွဲလမ်းသဘင်တွေ၊ အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှု Video တွေကိုပါ CyberLink PowerDirector ကိုသုံးပြီး Edit လုပ်ကြပါတယ်.. နယ်က အချို့ Video ရိုက်ကူးရေး၊ တည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်ရေးသမားတွေတောင် CyberLink PowerDirector ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်.. ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ CyberLink PowerDirector 15 ( Lite Edition ) မှာ Transition တွေမျိုးမျိုး၊ Text Animation တွေအမျိုးမျိုး၊ Effect တွေပေါင်းစုံ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး 360ံVideo တွေလည်း ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
1. အောက်ကလင့်ကိုသွားပါ.. နာမည်နဲ့ အီးမေးကိုဖြည့်ပြီး Submit ကိနှိပ်လိုက်ပါ.. ကိုယ်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ အီးမေးထဲကို လိုင်စင်ကုဒ်နဲ့ Setup ဖိုင် Download Link ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်.. Setup ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီး သူပေးတဲ့ လိုင်စင်ကီးကိုဖြည့်လိုက်ပါ..
Click Here to get Free License Key
1. အောက်လင့်မှာ Setup ဖိုင်ကိုဒေါင်းပါ..
Download Setup File : 568.27 MB
2. အောက်က Key ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
license key: YRF2J-L5A7V-2JGXW-AJHJV-CMP9B-HKJTN
ဒီကီးက ၁၈.၆.၂၀၁၈ ထိ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၁၈.၆.၂၀၁၈ နောက်မှ အသုံးပြုတဲ့သူက ရ/မရ မသေချာပါဘူး.. အင်တာနက်ပိတ်ပြီး ထည့်ကြည့်ပေါ့.. ကဲ 49.99 ဒေါ်လာတန်ကို တရားဝင်လိုင်စင်လေးနဲ့ သုံးလိုက်ရအောင်...
Video Editing လုပျတဲ့ Software တှထေဲမှာ CyberLink PowerDirector ကို လူသုံးမြားပါတယျ.. သာမနျ အပြျောတနျး Home Video သာမက ပှဲလမျးသဘငျတှေ၊ အမှတျတရ လှုပျရှားမှု Video တှကေိုပါ CyberLink PowerDirector ကိုသုံးပွီး Edit လုပျကွပါတယျ.. နယျက အခြို့ Video ရိုကျကူးရေး၊ တညျးဖွတျထုတျလုပျရေးသမားတှတေောငျ CyberLink PowerDirector ကိုအသုံးပွုကွပါတယျ.. ခုတငျပေးလိုကျတဲ့ CyberLink PowerDirector 15 ( Lite Edition ) မှာ Transition တှမြေိုးမြိုး၊ Text Animation တှအေမြိုးမြိုး၊ Effect တှပေေါငျးစုံ ပါဝငျလာမှာဖွဈပွီး 360ံVideo တှလေညျး ဖနျတီးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ...
1. အောကျကလငျ့ကိုသှားပါ.. နာမညျနဲ့ အီးမေးကိုဖွညျ့ပွီး Submit ကိနှိပျလိုကျပါ.. ကိုယျဖွညျ့ခဲ့တဲ့ အီးမေးထဲကို လိုငျစငျကုဒျနဲ့ Setup ဖိုငျ Download Link ပို့ပေးပါလိမျ့မယျ.. Setup ဖိုငျကိုဒေါငျးပွီး သူပေးတဲ့ လိုငျစငျကီးကိုဖွညျ့လိုကျပါ..
1. အောကျလငျ့မှာ Setup ဖိုငျကိုဒေါငျးပါ..
2. အောကျက Key ကိုအသုံးပွုနိုငျပါတယျ..
ဒီကီးက ၁၈.၆.၂၀၁၈ ထိ အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပွီး ၁၈.၆.၂၀၁၈ နောကျမှ အသုံးပွုတဲ့သူက ရ/မရ မသခြောပါဘူး.. အငျတာနကျပိတျပွီး ထညျ့ကွညျ့ပေါ့.. ကဲ 49.99 ဒျေါလာတနျကို တရားဝငျလိုငျစငျလေးနဲ့ သုံးလိုကျရအောငျ...
Computer software, Editor, Giveaway, Video Editing
Computer software Editor Giveaway Video Editing
CyberLink PowerDirector 15 (Lite Edition) Pro ( Fr...